ဦးနှောက်အခြေခံ: အသက်အရွယ် 25 မှဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများကို | ဖောင်ဒေးရှင်းကဆုချ
ပင်မစာမျက်နှာ ဦးနှောက်အခြေခံ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ဦးနှောက်
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကို ၁၀ နှစ်မှ ၁၂ နှစ်အတွင်းအပျိုဖော်ဝင်ခြင်းစတင်ခြင်းနှင့်စတင်ပြီး ၂၅ နှစ်အထိကြာသည်။ ဆယ်ကျော်သက် ဦး နှောက်သည်ဇီဝကမ္မဆိုင်ရာ၊ ခန္ဓာဗေဒနှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်ကလေး၏အရွယ်ရောက်ပြီးသူနှင့်အရွယ်အစားကွဲပြားခြားနားသည်ကိုနားလည်ရန်အထောက်အကူဖြစ်သည်။ မိတ်လိုက်ခြင်းအစီအစဉ်သည်အပျိုဖော်ဝင်ချိန်တွင်လိင်ဟော်မုန်းများရောက်ရှိလာခြင်းနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့၏အာရုံသို့ပေါက်ကွဲသွားသည်။ ကလေး၏အာရုံသည်အရုပ်များနှင့်ပြိုင်ကားများမှသည်သဘာဝနံပါတ်တစ် ဦး စားပေးမျိုးပွားခြင်းသို့လှည့်သွားသောအခါဖြစ်သည်။ ဒါ့အပြင်ဆယ်ကျော်သက်ရဲ့လိင်မှုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုအတွေ့အကြုံရနိုင်မလဲဆိုတာကိုစူးစမ်းလိုစိတ်ပြင်းပြလာတယ်။
အောက်ပါ TED ကိုကိုခေါ်သိမြင်အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်ပါမောက္ခယျရာဂြနျေး Blakemore အားဖြင့် (14 မိနစ်) စကားပြော အဆိုပါဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်၏လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်ပြုပြင်ခြင်း, ကျန်းမာသောဆယ်ကျော်သက်အရွယ် ဦး နှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုရှင်းပြသည်။ သို့သော်သူမသည်လိင်အကြောင်း၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုနှင့်၎င်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုမပြောပေ။ သတင်းကောင်းကတော့ဒီထိပ်ဆုံးကပါ တင်ဆက်မှု (50 မိနစ်) ပါပဲ။ ဒါဟာအမေရိကန်အတွက်မူးယစ်ဆေးဝါးအမျိုးသားတက္ကသိုလ်မှ neuroscience ပါမောက္ခအားဖြင့်နှင့်ဂိမ်းကစားခြင်း, ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်လောင်းကစားများကဲ့သို့အရက်သို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးများနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်တူလှုံ့ဆော်မှုအဆိုပါဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်လွဲသွားနိုင်ပါတယ်ဘယ်လိုအဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေရှင်းပြသည်။
ဒါကအသုံးဝင်ပါတယ် podcast တခုကို (၅၆ မိနစ်) Gary Wilson ၏ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် ဦး နှောက်သည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းပုံကိုမည်သို့အထူးဖော်ပြထားသည်။ သူကတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းတို့အကြားကွာခြားချက်ကိုရှင်းပြသည်။
ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်သည်အရှိန်မြှင့်သင်ယူခြင်းကာလဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အသိုက်မှထွက်ခွာရန်ပြင်ဆင်မှုအတွက်အရွယ်ရောက်သူအတွက်လိုအပ်သောအတွေ့အကြုံသစ်များနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုများကိုလျင်မြန်စွာစတင်ရှာဖွေသည့်အခါဖြစ်သည်။ ဦး နှောက်တစ်ခုချင်းစီသည်ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံနှင့်သင်ယူမှုတို့ဖြင့်ဖန်တီး၊ ပုံသွင်းသည်။
ဦးနှောက်ဟာ prefrontal cortex, Self-ထိန်းချုပ်မှု, ဝေဖန်စဉ်းစားတွေးခေါ်, ဆင်ခြင်ခြင်းနှင့်ရေရှည်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအတွက်တာဝန်ရှိသည်ဧရိယာပိုမိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှတ်တရများနှင့်စိတ်ခံစားမှုရာအဆိုပါ limbic ဒေသများချိတ်ဆက်အားဖြင့်ဆုလာဘ် system ကိုပေါင်းစပ်ပြီးအဖြစ်ဒါကအရှိန်မြှသင်ယူမှုတွေ့ကြုံတတ်၏။ ဒါဟာအစဖြစ်တယ် myelin ကိုခေါ်ဖက်တီးအဖြူကိစ္စနှင့်အတူပါတဲ့လူသုံးအများဆုံးအာရုံကြောလမ်းကြောင်း coating အားဖြင့်သူတို့အားကွဲပြားခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများအကြားဆက်သွယ်မှုကိုတက်အမြန်နှုန်း။
ပေါင်းစည်းခြင်းနှင့်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခြင်းကာလအတွင်းဤဆယ်ကျော်သက် ဦး နှောက်သည်ထပ်ခါတလဲလဲအတွေ့အကြုံနှင့်အလေ့အကျင့်များဖြင့်အားဖြည့်ထားသောခိုင်မာသောလမ်းကြောင်းများကိုစွန့်ပစ်။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် ဦး နှောက်ကိုလည်းပြန်လည်ဖြတ်တောက်ပေးသည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏ဆယ်ကျော်သက်များသည်သူတို့၏အချိန်အများစုကိုအင်တာနက်တွင်တစ်ယောက်တည်းကုန်ဆုံးစေခြင်း၊ သို့မဟုတ်အခြားလူငယ်များနှင့်ရောနှောခြင်း၊ ဂီတလေ့လာခြင်း၊ အားကစားကစားခြင်းကိုအသုံးပြုသည်ဖြစ်စေ၊ လူသုံးအများဆုံးနည်းလမ်းများသည်သူတို့အရွယ်ရောက်လာသည့်အခါလျင်မြန်သောစူပါအဝေးပြေးလမ်းများနှင့်တူလိမ့်မည်။
အစောပိုင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်မှာတော့စိတ်လှုပ်ရှားစရာအဘို့အလိုဆန္ဒသည်၎င်း၏အမြင့်ဆုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်ကိုပိုမို dopamine ထုတ်လုပ်ရန်ကြောင့်ပိုပြီးထိခိုက်မခံများမှာအသစ်ဆုလာဘ်စမ်းသပ်ရန်နှင့်အန္တရာယ်များကိုယူစေခြင်းငှါကားမောင်း။ ပိုများသော dopamine လည်းသူများသစ်ကိုလမ်းကြောင်းခိုင်မာအောင်အားပေးကူညီပေးသည်။
ဥပမာအားဖြင့်သူတို့အများဆုံးအရွယ်ရောက်ဖုံးကွယ်ဖို့အပြေးကြလိမ့်မယ်လို့ gory, တုန်လှုပ်ဖွယ်, action ကိုထုပ်ပိုး, ထိတ်လန့်ဇာတ်ကားတွေပိုမိုသည်းခံစိတ်ရှိသည်။ သူတို့ဟာသူတို့ထဲကလုံလောက်စွာမရနိုင်ပါ။ စွန့်စားမှုဆည်းပူးနေ, နယ်နိမိတ်စမ်းသပ်ခွင့်အာဏာကိုစိန်ခေါ်သူတို့၏ဝိသေသလက္ခဏာအားကောင်းမောင်းသန်အတိုင်း, သူတို့ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏သဘာဝအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အားလုံးအကြောင်းအရာဖြစ်တယ်။ သူတို့ကအရက်သောက်, မူးယစ်ဆေးဝါးယူပြီး, အကာအကွယ်မဲ့လိင်ဆက်ဆံမှုများနှင့်တိုက်ပွဲများရှိခြင်းအန္တရာယ်ရှိတဲ့ဖြစ်ကြပေမယ့်စိတ်လှုပ်ရှား၏အကျိုးကို '' ယခု '' နောက်ပိုင်းမှာအကျိုးဆက်များအကြောင်းကိုစိုးရိမ်ပူပန်ထက်တန်ခိုးကြီးကြောင်းကိုငါသိ၏။
ယနေ့ခေတ်ဆယ်ကျော်သက်များနှင့် ပတ်သက်၍ မည်သူမဆိုအတွက်စိန်ခေါ်မှုမှာမြီးကောင်ပေါက်အရွယ် ဦး နှောက်သည်အထူးသဖြင့်အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုအပါအ ၀ င်စိတ်ကျန်းမာရေးချို့ယွင်းမှုများကိုပိုမိုထိခိုက်လွယ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ စွဲလမ်းမှုတစ်ခုရှိခြင်းသည် dopamine ကိုမြင့်တက်စေသောအခြားအရာများနှင့်အရာများအားရှာဖွေခြင်းကိုမောင်းနှင်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်စွဲလမ်းစေသောအရာများသည်နီကိုတင်း၊ အရက်၊ မူးယစ်ဆေးဝါး၊ ကဖိန်းဓာတ်၊ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းခြင်း၊ ဂိမ်းကစားခြင်းနှင့်လောင်းကစားခြင်းတို့အားလုံးတွင်စိတ်ဖိစီးမှုကိုဖြစ်စေပြီးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအတွက်ရေရှည်ဆိုးကျိုးများဖြစ်စေသည်။ စွဲလမ်းမှုများသည်ဖွံ့ဖြိုးရန်အချိန်ကြာနိုင်သော်လည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆင်မပြေမှုများနှင့်လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုများနှင့်စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းတို့သည်ဆယ်ကျော်သက်များအကြားတွင်အလွန်အဖြစ်များသည်။ ဥပမာအားဖြင့်အရက်၊ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဂိမ်းကစားခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုအသုံးပြုခြင်းသည်စိတ်ကျန်းမာရေး၊ ဆက်ဆံရေးနှင့်ရာဇ ၀ တ်မှုများကိုပင်ထိခိုက်စေသောစိန်ခေါ်မှုများကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။
ယခုနေထိုင်ခြင်း - လျှော့စျေးလျှော့ချခြင်း
အဲဒီလို့ဘာဖြစ်လို့? အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အန္တရာယ်ရှိသောအပြုအမူများအပေါ် 'ဘရိတ်ခြင်း' အဖြစ်လုပ်ဆောင်သောတိုကျရိုကျသောအလငျးမြားမှာမဖွစျသေး၊ ၎င်းကိုနောင်တွင်လျှော့စျေးလျှော့ခြင်းအဖြစ်လူသိများသည် - နောင်တွင်ပိုမိုကောင်းမွန်သော်ငြားလည်းအနာဂတ်တွင်ရရှိမည့်ဆုကိုချက်ချင်းဖြည့်ဆည်းပေးရန်ပိုလိုလားသည်။ အရေးကြီးသောမကြာသေးမီကပြုလုပ်ခဲ့သောသုတေသနများအရအင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းသည်ပိုမိုမြင့်မားသောနှုန်းကိုထုတ်လုပ်သည် လျော့စျေးနှောင့်နှေး။ ဤသည်မိဘများနှင့်ဆရာ, ဆရာမများအတွက်အမှန်တကယ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်။ ဒီနေရာမှာတစ်ဦးအထောက်အကူဖြစ်ပါသည် ဆောင်းပါး အသစ်ကသုတေသနဆွေးနွေးခြင်းအကြောင်းအရာပေါ်မှာ။ အပြည့်အဝဆောင်းပါးရရှိနိုင်ပါသည် ဒီမှာ။ အချုပ်အားဖြင့်ဆိုရလျှင်၊ ညစ်ညမ်းမှုကိုသုံးပတ်မျှသာစွန့်လွှတ်ခဲ့ကြသောညစ်ညမ်းသူများသည်ယခင်ကမရှိခဲ့ဖူးသောသူများထက်ပိုမိုကျေနပ်ရောင့်ရဲနိုင်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည် ဆန္ဒပြည့်ဝမှုကိုနှောင့်နှေးစေခြင်းသည်ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်အားနည်းစေသောအဓိကဘဝကျွမ်းကျင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးပိုမိုညံ့သောစာမေးပွဲရလဒ်များ၊ ကုန်ထုတ်စွမ်းအားနိမ့်ခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းသုံးစွဲသူများစွာ၏ယေဘုယျအားဖြင့်အရှက်တကွဲဖြစ်ခြင်းတို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ သတင်းကောင်းမှာ၎င်းသည်အချိန်ကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှအသုံးပြုသူများသည်ညစ်ညမ်းမှထွက်သွားသည့်အခါပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားသည်။ မိမိကိုယ်ကိုအစီရင်ခံခြင်းဥပမာကိုဤနေရာတွင်ကြည့်ပါ ပြန်လည်နာလန်ထူပုံပြင်များ.
ကျွန်တော်အရွယ်ရောက်ဖြစ်လာသည့်အခါဦးနှောက်သင်ယူဖို့ဆက်လက်ပေမယ့်, သူကထိုကဲ့သို့သောလျင်မြန်နှုန်းမှာအဲဒီလိုမထားဘူး။ အဘယ်အရာကိုငါတို့သည်ငါတို့၏မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်သင်ယူဖို့ရှေးခယျြကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်သာယာဝပြောရေးတို့အတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ နက်ရှိုင်းသောသင်ယူမှုအဘို့အခွင့်အလမ်းကိုပြတင်းပေါက်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၏အထူးကာလပြီးနောက်ကျဉ်းမြောင်း။
တစ်ဦးကကျန်းမာဦးနှောက်တစ်ခုဘက်ပေါင်းစုံဦးနှောက်, အကျိုးဆက်များတက်ချိန်နှင့်ရည်ရွယ်ချက်ကိုအပေါ်အခြေခံပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်သောတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာရည်မှန်းချက်ကိုသတ်မှတ်ပြုလုပ်အောင်မြင်ရန်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာစိတ်ဖိစီးမှုမှခံနိုင်ရည်ရှိပါတယ်။ ဒါဟာမရှိတော့တဦးတည်းအစေခံကြောင်းအလေ့အထများနားမလည်နိုင်ပါ။ ဒါဟာဖန်တီးမှုအသစ်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အလေ့အထများကိုသင်ယူနိုင်စွမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တစ်ဦးကျန်းမာဘက်ပေါင်းစုံဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အလုပ်လုပ်နေလျှင်, ငါတို့သည်ငါတို့၏အလားအလာထပ်တိုးခြင်းနှင့်တည်ဆောက်ကျနော်တို့ပွင့်လန်း, ငါတို့န်းကျင်အပေါ်သွားသောအရာကိုသတိထားမိနှငျ့အခွားသူမြား၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဖို့အထိခိုက်မခံဖြစ်ကြ၏။ ကျွန်တော်တို့သည်အပွင့်လန်းဘဝကိုပျြောမှေ့နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စစ်မှန်တဲ့အလားအလာရောက်ရှိဖို့။